धरान । राजन कडेल विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. १२ निवासी हुनुहुन्छ । उहाँ यातायात मजदुरहुँदै सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ । कडेल अहिले सुनौलो पूर्व नेपाल यातायात प्रालिका अध्यक्ष, नेकपाको विराटनगर महानगर कमिटिका सचिवालय सदस्य रहनुभएको छ । कडेलसँग उहाँकै निवासमा पुगेर औजारन्युजडटकमको टिमले गरेको कुराकानी । राजन कडेल, यातायात व्यवसायी
यहाँले आफुलाई कसरी परिचय गराउनुहुन्छ ?
म आफ्नो परिचय दिँदा स्वरोजगार मजदुर नै भनेर दिने गर्दछु । किनभने म यातायात क्षेत्रमा मजदुरबाट नै आएको हुँ । अहिले मलाई व्यवसायीहरुको अध्यक्ष बनाएका पनि छन् । म मजदुरबाटै संघर्ष गरेर आएको हुँदा म आफुलाई मजदुर नै भन्न रुचाउछु ।
तपाईले यातायात मजदुरीका क्षेत्रमा कतिवर्ष बिताउनुभयो ?
म यो क्षेत्रमा २०३९ सालदेखि नै लागेको हुँ । त्यसबेला म यातायात क्षेत्रमा हेल्परको काम गर्दै, बुकिङहुँदै व्यवसायी भएको हँु ।
कसरी यो क्षेत्रमा लाग्नुभयो, कति संघर्ष गर्नुभयो ?
मेरो जन्म भारतको बिरपडामा भएको हो । मेरो दाईहरु यहाँ –विराटनगरमा) आए । दाजुहरु पनि यातायात क्षेत्रमा नै हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेलादेखि नै यातायात क्षेत्रमा काम गर्दै आए । मेरो ठूलो दाजुले यही काम लगाइदिनुभयो । एउटा ग्यारेजमा मेकानिकको काम गरे । केही समय हेल्परको काम पनि गरे । त्यसपछि कन्डक्टर चेकिङको काम गर्दै बुकिङ क्षेत्रमा आए । बुकिङमा लामो समय काम गरे । त्यसपछि नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनमा प्रवेश गरे । संगठनको इकाइ अध्यक्ष हुँदै अञ्चल अध्यक्षसम्म भए । त्यस पश्चात यातायात व्यवसायीको संगठनमा छु ।
एउटा सामान्य जीवनबाट यो सफल जीवनसम्म आइपुग्न कसरी सम्भव रहेछ ?
संघर्षकै कारण म सफल भएको हुँ । त्यतिकै साथीभाइको साथ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यो यातायात क्षेत्रलाई मानिसले अलि हेलाको दृष्टिकोणले हेर्ने गर्दछन् । एकाध यातायात मजदुर र व्यवसायीहरुको खराबीको कारण सम्पूर्ण क्षेत्र नै बदनामी भएको हो । तर विस्तारै यो कुरा पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ ।
सडक दुर्घटना र यात्रुहरुलाई दुव्र्यवहारको धेरै हुन्छ नी किन ?
दुर्घटना त कसैले चाहेर हुँदै हुँदैन । दुर्घटना गराउछु भन्ने कसैले सोच्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । जहाँसम्म यात्रुमाथी हुने दुव्यवहारको कुरा छ । त्यो चाही केही केही खराब मान्छेको कारण समग्र यो क्षेत्रलाई असर गरेको हो । यातायात मजदुरले यात्रीलाई सही सलामत गन्तव्यमा पु¥याउने जिम्मा लिएका हुन्छन् ।
लकडाउनले यातायात क्षेत्रमा कस्तो असर पा¥यो ?
लकडाउनले त यातायात क्षेत्र थाङथिलो नै बनायो नि । व्यवसायी ऋणमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । मजदुरहरु कयौ छाक भोक भोकै बस्न बाध्य भए । लकडाउनले त हामीलाई गर्नु नगर्नु सबै ग¥यो नि ।
सरकारले राहत पनि त दियो नि ?
कहाँ दियो ? के दियो ? गफले मात्रै हुन्छ र ? हामीले पाएको भनेको आश्वासन मात्रै हो । बरु हामी व्यवसायीले यातायात मजदुरहरुलाई केही राहत बाड्यौ । सरकारले केही दिएन । बरु हामीलाई मारवाडी समुदाय, अन्य व्यवसायीहरुले केही सहयोग गरे । जसका कारण हाम्रा मजदुरहरुलाई राहत बाड्न सक्यौ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग कयौ पटक सहयोग माग्दै पुग्यौ हामी तर आश्वासन भन्दा अरु केही पनि पाएनौ ।
अहिलेको अवस्था चाही के छ त ?
अब अहिले पनि त उही छ । यातायात खुलेको भए पनि बजारमा चहलपहल छैन । यात्रु छैनन् । हामी व्यवसायीको तर्फबाट हेर्ने हो भने त पुरै घर घाटा छ । तर मजदुरलाई भने केही राहत मिलेको छ । कम्तिमा उनीहरुको रोजी रोटीको सुरुवात त भयो ।
यातायातकै कारण कोरोना संक्रमण बढ्यो भन्नेहरु पनि त छन् नी ?
यो त जगजाहेर नै छ नि । विराटनगरका मान्छे काठमाडौ पुग्छन्, काठमाडौका यहाँ आउछन् । नेपालगञ्जका मान्छे यहाँ यहाँका त्यहा पुग्छन् । यसले गर्दा केही न केही संक्रमण त बढ्छ नै । के गर्ने त यसको बिकल्प के छ त ? हामीले सेनिटाइजर, मास्क प्रयोग गर्ने जस्ता सुरक्षाका उपाय अपनाइ नै रहेका छौ । बिस्तारै ठिक होला आशा गरौ ।
सरकारले के ग¥यो भने राम्रो होला ?
सरकार आफ्नै रडाकोमा छ के गर्ला र । ३ बर्ष त लुछाचुडीमा बितिसक्यो के आशा गर्ने र । सरकारको सानो अंग त म पनि हो नी हाम्रो पाटीको बहुमतको सरकार छ । काठमाडौ बसेर नेताहरुले लुछाचुडी गर्ने बेला थिएन । हाम्रो पार्टीका नेताहरु जो सरकारमा छन् वा जो नेतृत्वमा छन् यी सबै काठमाडौमा लडाइ गरेर बस्ने बेला हो त यो ? गाउँगाउँमा गएर को भोकै छ ? कसलाई के अफ्टेरो छ के सहयोग गर्नुपर्छ ? यो कुरा हेर्नुपथ्र्याे । त्यसैले सरकारले के गर्ला र ।
सरकारमा नै समस्या छ त ?
सरकारमा मात्र होइन नेतृत्वमा नै समस्या छ । हिजो माधव कमरेड, प्रचण्ड कमरेड, झलनाथ कमरेड आफु सत्तामा हुँदा मैले के गरे भन्ने सोच्नु पर्दैन । सरकारलाई असहयोग गर्ने लडाउने लुछाचुडी गर्ने जस्ता खेलमा अल्झिने समय होइन यो ।
जब नेकपाको सरकार आयो, धेरै कालखण्ड भोग्नुप¥यो । नाकाबन्दी भयो, कोरोना भयो बास्तवमा खुलेर काम गर्न पनि पाएन । तर अहिले पनि समय छ । पाटीका नेताहरु मिलेर राम्रो काम गरे भने राम्रो हुन्छ । जनताको घर घरमा गएर काम गर्नुप¥यो । जनताको चाहाना के छ त्यो बुझेर काम गरे राम्रो हुन्छ ।